PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - I-ANC IGXEKA IZENZO ZAMADELANGOKUBONA
I-ANC IGXEKA IZENZO ZAMADELANGOKUBONA
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Izindaba - LUCKY CAIN
USIHLALO we-african National Congress Kwazulu-natal, umnu Sihle Zikalala, uphumele obala wagxeka izenzo zenhlangano ezibiza ngefederation for Radical Economic Transformation zokuvimbezela izinkampani ezisuke zithole umsebenzi ukuba ziwuqhube.
Umnu Zikalala ekhuluma emcimbini wabahleli bezindaba obusecoastlands, emhlanga, uthe kumele umthetho ungenelele kulaba abafuna ukuzenzela umathanda, bangawuhloniphi umthetho okhona ngohlelo lokuthola amathenda.
“Siyahambisana nohlelo lweradical Economic Transformation, kodwa indlela le nhlangano eqhuba ngayo izinto iphikisana nomthetho ngakho-ke kasihambisani nalokho,” kusho umnu Zikalala.
Ugcizelele ukuthi kumele kulandelwe imigudu efanele futhi kuboniswane uma kukhona lapho kunokungaboni ngasolinye khona. Lokhu ukusho ngaphambi kokuvela kwezindaba zokuthi le nhlangano ngolwesine ntambama ivimbizele izikhulu zomnyango wezempilo okubalwa nenhloko yawo, udkt Musa Gumede, emahhovisi alo mnyango emgungundlovu.
Ngokwemibiko, amalungu ale nhlangano agasele emhlanganweni obuqhubeka wezikhulu zalo mnyango, kwaphazamiseka umhlangano. Kuthiwa la malungu aqale abhikisha ngaphandle ngaphambi kokugasela emahhovisi alo mnyango. Sekuke kwabikwa ngezigameko ezahlukene okuthiwa zenziwa ngamalungu ale nhlangano ngaphansi kwayo okukhona nabazibiza ngamadelangokubona, okufuna ukuthola imisebenzi yamathenda ngo “dli” ezinhlakeni ezahlukene kuhulumeni.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngasekuqaleni kwalo nyaka amalungu athile ale nhlangano agasele emahhovisi kamasipala wetheku lapho bekunohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe kwesinye isikhulu salo masipala.
La malungu abefuna lolu hlelo lokuqondiswa izigwegwe lungaqhubeki njengoba abethi uma luqhubeka lukhombisa ukulwa nohlelo lwe-ret.